I-Zigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) I-Zigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
I-Zigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Intengo ivame ukuhamba ekushintsheni kwemakethe. Ukube ubungagcina isenzo sentengo eduze, uzobona ukuthi yize ukunyakaza kwayo kungabonakala kungahambi kahle, futhi kaningi iba nokukhonjwa kwentengo njengoba kukhanya kushadi lentengo. Abahwebi abangabeka isikhathi ngalokhu kushaywa kahle bangakwazi ukuzuza emakethe ye-forex ngokuqhubekayo. Noma kunjalo, akulula ukunquma.
Enye yezindlela abahwebi abakhomba ngayo ukuguquka kwemakethe okunjalo kanye nokubuyiselwa emuva okuhambisanayo ngokubheka ukwehluka. Lelisu liyisibonelo secebo lokuhweba elisuselwa ekuhlukaneni elisebenzisa inguqulo eguquliwe ye-MACD njengesisekelo sokukhomba ukwehluka.
Zigzag MACD Amakhandlela Inkomba
1 Zigzag MACD Amakhandlela Inkomba
2 kwehlukana Ukuhweba
4.3 Indlela yokufaka iZigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy for MT5?
I-Zigzag MACD Candle Indicator iyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso esekelwe enhlanganisweni ye-Classic Moving Average Convergence and Divergence (MACD) oscillator kanye nesikhombi seZigzag. Empeleni, yisikhombi se-Zigzag esisetshenziswe kusikhombi se-MACD.
Le nkomba ihlanganisa i-MACD njengoba nje i-MACD ejwayelekile ibizokwenza. Ihlanganisa umehluko phakathi kwezilinganiso ezimbili ezihamba phambili ze-Exponential Moving (UMAMA), okusethwe ngaphambilini njenge 12 imigoqo kanye 26 Amabha. Iphinde ihlanganise umugqa wesiginali ongaphansi, esethwe ngaphambilini njenge 9 isikhathi Isilinganiso Esishukumisayo Esilula (Isikolo sebanga eliphezulu) umehluko phakathi kwama-EMA amabili.
Noma kunjalo, esikhundleni sokuhlela imigqa ye-MACD nomugqa wayo wesiginali ohambisanayo, le nkomba iveza iMAC njengamabha kuphela. Lawa mabha asethwe kabusha ngandlela thile afana ne-Heiken Ashi Moving Average bar, kepha abasebenzisi bangakhetha ukuba nemigoqo yenkomba yenkomba ngandlela thile efana nemigoqo ejwayelekile ye-Heiken Ashi Candlestick. Umbala wemigoqo nawo uyashintsha noma nini lapho uthola ukuguquka kwesimo noma umfutho. Ihlela imigoqo yetiye ukukhombisa ukuthambekela kwe-bullish noma umfutho, nemigoqo epinki ukukhombisa ukuthambekela kwe-bearish noma umfutho.
Inkomba bese ikhomba iziqongo nezidiphozi zokushaywa kwemigoqo ye-MACD ngokususelwa kumigoqo ehambela ekushintsheni kwangaphambilini ngaphezu kwephesenti elisethwe ngaphambilini, njengoba nje izinkomba eziningi zeZigzag zingenza kanjalo. Ibe seyakha umugqa ohlanganisa iziqongo ezikhonjiwe kanye nediphu kumabha we-MACD akha iphethini efana ne-zigzag.
Ukuhluka kwengxenye yeZigzag yale nkomba “yi-ExtDepth”, “Ukwehlukana”, ne- “ExtBackstep”, ezifanayo nezinkomba eziningi zeZigzag.
Lapho kugcinwa ishadi lentengo, uzobona ukuthi isenzo samanani ngokuvamile sakha iziqongo nezidiphozi njengoba amanani ashibilika eshadini lentengo. Lezi ziqongo neziphothi yilokho esikubiza ngokuthi ama-swing highs kanye nama-swing lows.
Abathengisi abaningi basebenzisa ama-oscillator, okuyizinkomba ezihlela imigqa noma imigoqo elingisa ukunyakaza kwesenzo sentengo ewindini lenkomba elihlukile. Njengoba oscillators belingisa isenzo sentengo, Iphinde yakha iziqongo nezidiphisi okuvame ukuqondana nokuphakama kokugwedla nokwehla kwesenzo sentengo. Kuyalandela futhi ukuthi ukuphakama nokujula kweziqongo zalo nokwehla kwalo kuzohambisana nokuphakama nokujula kokuphakama kokujula nokujula kwesenzo sentengo.
Ekuhwebeni kwezobuchwepheshe, ukwehluka ngamaphoyinti eshadini lentengo lapho ukuphakama nokujula kweziqongo nokucwilisa ku-oscillator bekungeke kuhambisane nokuphakama nokujula kokuphakama kokujikisa kanye nokwehla kokwehla kwesenzo sentengo maqondana neziqongo zangaphambilini nezidiphozi, kanye nokuphakama kokuphakama nokujikisa kokujingayo. Ukwehluka okunjalo phakathi kwe-oscillator nesenzo sentengo kuvamise ukukhombisa ukubuyela emuva okungahle kube namandla ekuguqulweni kwentengo okulandelayo.
Ngezansi kuneshadi elibonisa izinhlobo ezahlukahlukene zokuhlukahluka.
Lelisu lokuhweba lidayisa ngokwehlukahlukana kususelwa kuZigzag MACD Candle Indicator.
Ukuphakama okuvumelekile nokudiphiza ku-oscillator ngokuvamile kunzima ukukukhomba. Ukwehliswa okuncane kuvame ukudala ukuthi abathengisi bakhombe iziqongo ezingafanele neziphothi ezithi zibangele isignali yokwehlukana ekhonjwe ngokungafanele.
Njengoba iZigzag MACD Candle Divergence Indicator ihlela ngokuzenzakalela umugqa we-zigzag okhomba iziqongo nokwehla, kungaba lula kakhulu kithina ukukhomba izimpawu eziguqukayo zokuguqula izinto ezivumelekile. Lokhu kuphakama kokujikisa nokushona phansi kuvame ukukhonjwa yinkomba eseduze nephuzu lapho umbala wemigoqo ye-oscillator ushintsha khona. Lokhu-ke kungaba yisignali yethu yokungena. Singabe sesigcina ukuhweba kuvulekile inqobo nje uma umbala wemigoqo ye-oscillator uhlala ufana okhombisa ukuqondiswa kokuhweba kwethu.
Thola ukusethwa kwe-bullish ukwehluka ngokuqhathanisa okufakwayo okuvumelekile okukhonjwe yi-Zigzag MACD Candle Indicator nokuncipha kwayo kwe-swing low.
Vula i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho imishayo ye-oscillator ishintshela ku-teal.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imishayo ye-oscillator ishintsha ibe pink.
Thola ukusethwa kwe-bearish kwehlukana ngokuqhathanisa iziqongo ezivumelekile ezikhonjwe yi-Zigzag MACD Candle Indicator nokuphakama kwayo okuhambisanayo kwentengo yesenzo.
Vula i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho imishayo ye-oscillator ishintshela kokuphinki.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imishayo ye-oscillator ishintshela ku-teal.
Ukushintshwa kokuhweba okuguqukayo kuyisu lokuhweba elisetshenziswa kakhulu ngabahwebi abangochwepheshe ezingeni lokuthengisa kanye nezikhungo. Empeleni, kunabahwebi abaningi abathi bathola inzuzo ngokungaguquguquki besebenzisa amasu okuhweba asuselwa ekuhlukaneni. Phakathi kwama-oscillator asetshenziswa abahwebi, i-MACD mhlawumbe ingenye yezinkomba ezisetshenziswa kakhulu ukukhomba ukwehluka. Ukuhlukahluka kokuhweba okususelwa ku-MACD kunamandla amaningi uma umhwebi esekwazi ukusebenzisa le nkomba. Noma kunjalo, akulula ukukhomba kahle ukwehluka okuvumelekile.
Isikhombi esisetshenziswe kuleli qhinga singasiza abadayisi kulokhu njengoba kuvumela abathengisi ukuthi babone kalula futhi babone iziqongo ezivumelekile nezediphu ku-oscillator ngokuya ngomugqa we-zigzag noma ngokushintsha kombala wamabha. Ukuphela kwekhono elisele ukuthuthukisa kungaba ukufunda ukuthi ungabona kanjani ukujikisa okulungile kuphakeme futhi kwehle ngesenzo sentengo. Abahwebi abakwazi kahle ukukhomba okwehlukahlukana besebenzisa inkomba enjalo bangazuza ngokuhweba besebenzisa lolu hlobo lwecebo.
I-Zigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 iyinhlanganisela yeMetatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Zigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka iZigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy for MT5?
Landa iZigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5.zip
Iya kwesokudla ukukhetha iZigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy for MT5
Uzobona iZigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 itholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleI-Weekly Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Isihloko esilandelayoI-XWPR Histogram Vol Direct Ixwayisa i-MT5 Indicator